अरवपति जर्साप भेटिएला त स्रोत ? – मुलधार न्युज
Home > प्रवास > अरवपति जर्साप भेटिएला त स्रोत ?
३१ भाद्र २०७५, आईतवार ०९:२३
काठमाण्डौ –भाद्र २४ गतेबाट अवकाश पाएका नेपाली सेनाका पुर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले जाँदाजाँदै अकुत सम्पत्ति जोडेको प्रमाण भेटिएको छ । क्षेत्रीले कमाएको अकुत सम्पत्ति पत्नी रीता बस्नेत क्षेत्री, छोरा अभिषेक र आभुषण तथा स्वयम् उनको नाममा देखिएको हो ।
तर मालपोतमा बढि राजश्व बुझाउनुपर्ने भएपछि करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र मुल्याङ्कन गरेर राजश्व तिरेको मालपोत स्रोतले जनायो । क्षेत्रीले पत्नी रिताको नाममा खरिद गरेको उक्त जग्गा इन्धनको कालोबजारी गर्ने विवादास्पद व्यापारी तिर्थ प्रधानको हो । कित्ता नम्बर ३५७१ को ७ कठ्ठा जग्गालाई दुई टुक्रा पारेर केही महिना पहिले ४ कठ्ठा ७ धुर उनले खरिद गरेका थिए । जुन जग्गा ओम चलचित्रको नाममा थियो । २०३४ सालमा नगर विकाससँग ओम चलचित्र बनाउन भन्दै लिएको उक्त जग्गा बेचविखन गर्न नपाइने नगरबिकासको नियम विपरित विक्री भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगलेसमेत छानविन थालेको बुझिएको छ ।
उक्त जग्गा प्रधानले नापी, मालपोत, वडाध्यक्ष, मेयर सवैलाई मिलाएर बिक्री गर्न सफल भएका हुन् । त्यसो त हेटौंडा वडा नम्बर–११ मा पनि करोडौंको जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । जहाँ अहिले क्षेत्रीका छोरा अभिषेकले करोडौंको महल धमाधम बनाइरहेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘काठमाडौंको सामाखुसी बसोबास गर्दै आएका क्षेत्रीको पुर्खौली सम्पत्ति दुई रोपनी थियो । क्षेत्रीका चार दाजुभाईमध्ये तीन दाजुभाईको जग्गासमेत पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीले भर्खरै खरिद गरेका छन् । सो जग्गा अहिले लगभग आनाको ५० दखि ८० लाखसम्ममा खरिदविक्री हुन्छ ।’ त्यसैगरी, क्षेत्रीका छोरा अभिषेकले जाराको ब्राण्ड नेपाल भित्राएका छन् । जसमा करोडौं लगानी रहेको छ । अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति क्षेत्री अहिले रातारात नवधनाड्य अर्बपति क्लबमा छिरेका छन् । राजधानीमा मात्र करिब एक दर्जन घर तथा महल किनेको स्रोतको दाबी छ ।
विगतमा क्षेत्रीका चारै दाजुभाईको हैसियत समान रहेकोमा अहिले भने उनको हैसियत एकाएक उकासिएको छ । क्षेत्री पदमै हुँदा उनले गरेको भ्रष्टाचार काण्ड युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले छलफलका लागि संसदमा प्रवेश गराएका थिए । सांसद बस्नेतले सेनाको नेतृत्व भ्रष्टाचारी भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । क्षेत्रीले फास्ट ट्रयाकको ठेक्काबाट ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि र सेनाले दिने विभिन्न ठेक्का पट्टाबाट ६ अर्ब बढि कमिसन खाएर अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप छ ।
यसैबीच, हेटौंडास्थित ओम्याक्स फिल्म हलको फेक आगलागी काण्डमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि प्रधान रातारात राजधानी आएर न्यायाधीशहरूसँग मिटिङ बसेको स्रोतले बतायो । केही दिनमै उक्त ‘फेक आगलागी काण्ड’ मा करोडौंको माग दावीअनुसार नै इन्योरेन्सले भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारीमा प्रधान जुटेका छन् ।
राजधानीको तिनकुनेबाट पेस्तोलसहित एक पक्राउ